Malagasy Dictionary and Madagascar Encyclopedia : andrianjafyorimbatonnyfiadanana
Entry Andrianjafy: Orimbaton' ny Fiadanana
Author Andrianjafy Michel
Publisher Imprimerie Takariva, 1970. Trano pirinty Fopipa, 1987
Dimensions Pages: 176.
Iny Rasolomanana miakatra ny tanàna. Na dia vava lalana aza Rambolasoa mianaka, dia ary amin-dRavonimbero rafozany izy aloha no nihevitra ny hivantana, ka rehefa diany dia hody vao hivily ao. Nohofain-dRaketamalala tanana avy eo am-baravarankely nony fantany fa hanitsy hianavaratra.
-- Isolo a! Aty aloha e!
Nivily Rasolo fa antsoin'ny anabaviny.
-- Ahoana izay?
-- Midira ange aloha e!
-- Ahoana fa maika aho?
-- Makà aloha toerana e! Izanajaza angaha hohanin'iza fa tsy ao amin-dreniny niteraka azy izy?
-- Ahoana anefa? sady nihabahaba toa hitombina toa hitsangana.
-- Misy dinika kely fa nasesiky ny razana ianao ka tonga, hoy Rambolasoa.
-- Antsika telo mianaka ihany anefa ny resaka, fa tsy azonao afindra na amin'iza na amin'iza, hoy Raketamalala.
-- Na dia amin'Izanany aza ve?
-- Izy indrindra no tena anafenana azy. Sao tsy ho mafy vava anefa Isolo?
-- Lazao fa hateliko e!
-- Tarihon-dry àry ny resaka, ry Ketaka, hoy Rambolasoa, fa izay tsy ampy fenoiko.
-- Izao àry, hoy Raketamalala: nisy nanipy voanjobory, hono, teo am-pandriananareo?
-- Hay! efa voalazan'lzanany anareo sahady?
-- Sempotsempotra ery izy nitantara azy anikeheo. Koa mihainoa sy mandiniha tsara, fa reninao nitondra anao folo volana, sy anabavinao nifanapatsinay taminao izahay ka tsy hanoro vohony anao akory!
-- Amin'ny ahoana anefa e? hoy Isolo niontana ambavafo.
-- Izao no izy: hifindra ety ianareo roa no hitoetra.
-- Ka hazoto amin'izany ve Izanany?
-- Satriny aza. Efa notsapainay teto ny lohany.
-- Ary tsy hahadikidiky amin'lneny eny Ambohimiadana?
-- Ambohijafy tompony indray ve no hangataka atiny e?
-- Inona anefa aloha no antony?
-- Voalohany aloha: hita fa misy te-hisompatra anareo any Ambohimiadana ka mety ny mihataka kely.
-- Ekeko raha ny amin'izany.
-- Faharoa manaraka izany: tsy anananay fahefana ianareo raha tsy misarimonina ety aminay.
-- Fahefana amin'inona moa ? hoy Isolo somary nitsangam-bolo.
-- Henoinao tsara, fa ity vao tena resaka: farano mihitsy ny hevitra fa tsy hanan-tamingana amin' lzanajaza akory ianao fa ho boribory tahaka ilay voanjobory natorak'olona teo am-pandrianareo...
-- ! ! ! !
-- Hataontsika tahaka ny fanorona ka izao no paika: rehefa hifindra ety ianareo (mody hoe haka rivotra no fiala amin-dRazafimpananina) dia atsy amin-dRavonimbero no mivantana fa tsy ato akory. Ka rehefa tonga ny andro mahamety, araka izay mbola hisikidianantsika azy, dia misintaka moramora ianao mankato aminay mianaka, fa Izanany efa eo anatrehan'ny nahitany masoandro. Azonao izany?
Nisondro-dra ny tavan-dRasolomanana. Tsembo-dratsy izy. Toa nivahavaha ny hoza-tenany manontolo. Badenina ny lohany. Nanjambena ny masony. Tsy ampy hitepoan'ny fony ny tratrany!
-- Ahoana ianao amin'izany tetika izany e? hoy Rambolasoa nanaitra azy tsy ho jenjin'ny fahatampohana.
-- Mbola hoeritreretina ny amin'izany ka I
-- Handany taona hieritreritra aiza indray e?
-- Koa raha hariako hatreo Razanajaza, dia ho aiza indray aho araka ny tetikareo mianaka?
-- Henoinao tsara indray fa tsy hanolo-bato mafana izahay akory, hoy Raketamalala.
Novonjen-dRambolasoa notohizina ny teny:
-- Efa nihevitra vady ho anao izahay matoa manao izany tetika izany. Tsy nitomemama fotsiny akory izahay mianaka fa mampiady loha andro aman'alina amin'izay hahasoa anao.
-- Dia iza indray no ho vadiko, hoy ianareo?
-- Izafin-dRahasy, zafikelin-dRa...
-- Zafikelin-dRaberesaka etsy Imaharidaza ve?
-- Fantatrao tsara. Bikan-janak'olona ireny an! Sahala amin' ny kinaoly Izanajaza mitaha aminy.
Toa falifaly nanaiki-molotra Rasolomanana. Nisava tampoka teo ny andohany nanelo. Efa mba nozohizohiny mangina teny tokoa mantsy Izafindrahasy, saingy voasingotra tampoka tamin-dRazanajaza izy. Ka toa nifongatra teo amin'ny fiereny indray ny fikasany taloha. Hay natory fotsiny ny fitiavany fa tsy maty akory!
-- Sady efa niresahanay anie izy ka nazoto ery e?! hoy Rambolasoa i'apaho haingana ny hevitrao, ry Solo, fa tahaka ny maka fanahy ny zanak'olona fotsiny izahay mianaka.
Nihodina tamin-dRasolo ny tany aman-danitra. Fa misy inona tokoa moa Razanajaza raha mitaha amin'lzafindrahasy? Na samy kamboty aza, hafa ny nandova be sy ny tsy manam-bariraiventy.
-- Hokaramaina anie ianareo raha hivady e! hoy Raketamalala.
-- Hokaramaina aho ana? hoy Rasolomanana.
-- Raha manaiky hanambady ny zafikeliny ,hono, ianao, hoy Ingahy Raberesaka, dia hataony tolotra ho anareo roa ny tanimbary iray vala be eo ambany andrefan'lnandihizana miampy ombalahy vositra anankiray ary vola farantsa tsy zakan-drerilahy.
Tsy nahatombina intsony Rasolomanana fa niaingainga foana eran'ny trano:
-- Marina ve?
-- Izahay mianaka koa mbola hanampy, hoy Rambolasoa.
-- Inona koa no hanampinareo mianaka? hoy Rasolo.
-- Ao fa haseho anao ny zavatra betsaka ato ambany rihana navelan'lngahy Dubosc ho anao. Afa-tsy ny firakotra sy ny lovia aman-tsotro mbamin'ny ravin-damba izay efa ampiasainay ato an-trano, dia ho hitanao ao ny palitao matevina misy roa aman'olona, pataloha fonom-basy volontany sy mangamanga, satroka, kiraro, lobaka, izay ho anao daholo mihitsy no nanomezany azy, saingy raha manaiky hanambady an'lzafindrahasy ianao vao hatolotray anao hanaovanao maso vao eran'ny faritany. Raha tsy izany, dia...
-- Efa tonga ato ve Rasolo e! hoy Razanajaza miantso ao ala-trano sady arahin-dRavonimbero.
Nihantona teo ny dinika tsy mivoa-drindrina: novangovangoina na hoatra ny fihina-mangahazo maina ary natao telimoka hoatra ny vary sosoa mahamay. Asa ny mpihinana na hahalevon-kanina na tsia...
Ny sitrapo sy ny vintana
Mba niseho ho mahery vaika Razanajaza tamin'izao indray mandeha izao ka nanaraka ambokony nody teny Ambohimiadana Rasolomanana. Faly am-panahy Razafimpananina. Rambolasoa mianaka kosa mivonto fo amin'ny hasosorana.
Fa nangatsiaka ny tokantranon'ny ankizy. Niova fihetsika Rasolomanana: tsy be herongerona intsony, tsy nanangana adiady intsony; kanefa tsy nitsiky fa monto-dava tsy ahitan-teny firy. Very dia very manko ny heviny, fa Razanajaza sarotra akifika, kanefa Izafindrahasy efa mivolon-ko tompony. Koa noho ny onjam-panambadiana tsy maintsy andeferana, dia toa foto-boandelaka hanim-bitsikambo no fijery an-dRazanajaza. Ary noho ny onjam-pitiatiavana te-hilevina aniritra eo amin'ny tanin'olona vita baorina, dia toa olona lasa ambiroa no fijery an-dRasolomanana. Mpivady samy rotehin'aretina.
Araka ny fantatry ny ntaolohahy, dia fanambadiana tsy mba nierana tamin'ny mpanandro mantsy: Asorotany sy Adijady mifaniho vintana. Hatramin'ny fanambinana isan-karazany no nandamoka be ihany, fa ny ambolen-tsy maniry, ny asosoka maty maso, ny am-pahitra kongonina, ny am-pisoko deronina, ary Ikoto sy Ikala tsy hita veroka.
Havarina amin'ny vintana àry ve ny andraikitra? Sa hatolaka amin'ny tsiny? Fetsy ny olombelona ka manadidy ny tononandro sy ny razana kanefa izy indrindra no tena tompon'antoka. Dia Rasolomanana sy Razanajaza: tompon'ny fony sy ny safidiny; ary Rambolasoa sy Raketamalala: tompon'ny ankasomparana sy ny mosavy. Fanambadian'iza no tsy hosedrain'ny rivo-mahery, fa ny foto-kazo marivo faka no tsy menatra ny hidaraboka!